1. पेनकेक्स वास्तवमै बनाउन धेरै सजिलो हुन्छ। केवल केही सामग्रीहरू र यसको लागि विशेष उपकरणहरू आवश्यक पर्दैन बेटर वा ओभन पनि तपाईलाई सबै चाहिन्छ एक तामचीनी प्यान पर्याप्त छ। आज हामीसँग पेनकेक्स बनाउनको लागि एक तरीका छ। एक अर्कालाई छोड्न आफैलाई सजिलो। तपाईं यो घरमा प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
2. प्यानकेक्सका लागि सामग्री १. गहुँको पीठो २. चिनी (खैरो चिनीको रूपमा सिफारिस गरिएको) B. बेकि powder पाउडर But. बटर वा तेल 5.. भेनिला पाउडर Gs. अण्डाहरू F. ताजा दुध 8.. आवश्यक टppपिंग्स जस्तै चकलेट, फल जाम, मह, कुकिज, ताजा फल, आदि।
3. गहुँको पीठो, २- 2-3 फाटो, १ अण्डा, २- 2-3 स्कूप ताजा दूध, चिनी सहित मुख्य सामग्रीहरू सँगै मिक्स गर्नुहोस्। त्यसोभए मानिसहरूलाई राम्ररी मिलाउन दिनुहोस्। यदि तपाइँसँग बीटर छैन भने, यो ठीक छ। यसको सट्टामा काठको फ्याँक्न प्रयोग गर्न सकिन्छ
4. अर्को, यी सामग्रीहरू थप्नुहोस्, यदि उपलब्ध छ: थोरै स्वाद र गन्धका लागि भेनिला पाउडरको थैली, र केही थप बेकि powder पाउडर, लगभग आधा चम्मच, प्यानकेक लाईट गर्न पर्याप्त छ। तर होशियार रहनुहोस् र धेरै बेकि powder पाउडर नथप्नुहोस्, किनकि यसले प्यानकेकलाई धेरै भरिने बनाउँदछ।
5. ग्यास खोल्नुहोस्, कम तातोमा प्यान सेट गर्नुहोस्। लगभग १ चम्मच तेल वा माखन थप्नुहोस् र माथीलाई पूरै प्यानमा सम्म फ्याँक्नुहोस्।
6. जब माखन पग्लिन्छ, हामीले तयार प्यानकेकको ब्याटर बाहिर स्कूप गर्न एउटा भर्या। वा फ्याल्नुहोस् प्रयोग गर्नुहोस् र यसलाई प्यानमा गोल आकारमा खन्याउनुहोस् जब यो पहिले तयार पारिएको पीठोको मिश्रणबाट 3-4- pieces टुक्रा पाउन सक्दछ, सायद लगभग।। -8 टुक्रा, लगभग2सेवा गर्न को लागी तयार
7. जब अर्को तर्फ ठीक पकाइन्छ, तपाईं अर्को तर्फ मोड्न सक्नुहुन्छ। होसियार हुनुहोस् धेरै शक्तिशाली आगो प्रयोग नगर्नुहोस्। र प्यान सेट गर्न को लागी प्रयास गर्नुहोस् आगोले प्यानमा समान रूपमा गर्मी पठाउँदछ। पेनकेक्स एकै समयमा पकाइनेछ।
8. प्लेटमा राख्नुहोस् र तपाईंलाई चाहिएको कुनै पनि टोपिंग्ससँग सजावट गर्नुहोस्, चाहे यो चकलेट, फल जाम, मह, कुकीज, ताजा फलहरू, आदि। न्यानो संस्करण पनि त्यस्तै स्वादिष्ट छ!
9. तपाईलाई कस्तो छ? प्यानकेक्स बनाउने विधि अपेक्षित भन्दा सजिलो छ, हैन? अब तपाईले क्याफेमा मेलमिलाप गर्नुपर्दैन किनकि म यो आफै गर्न सक्छु। तपाई जति चाहानुहुन्छ धेरै छिटो थप्न सक्नुहुन्छ। यसलाई प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्, र तपाईं हुक हुनुहुनेछ। सुरुवात थोरै ढिलो हुन सक्छ, तर यदि तपाईं यसलाई प्राय जसो अभ्यास गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ पक्कै बढी धाराप्रवाह हुनेछ एक दिन सम्म तपाईले चाहानु भएको नुस्खा थाहा हुन्छ के सामग्री र कति राख्न तपाईलाई जस्तो मिठाइ घटाउनुहोस्। पेनकेक्सका फाइदाहरू मात्र बनाउन सजिलो हुँदैन। अझै नयाँ स्वादहरूको आनन्द लिनुहोस् Toppings पनि संग हाम्रो मनपर्ने केरा र Nutella हो, त्यसोभए तपाईं के प्रयास गर्नुहुन्छ र सबैभन्दा बढी प्यानकेक्स खान तपाईंलाई के मन पर्छ?